कस्तो खानाले पेट सफा हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
पाचन तन्त्रले कसरी काम गर्छ ? :- पाचन तन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न सकियो भने खानपानमा लापरबाही गर्न मन लाग्दैन । जस्तो हामी विभिन्न खानेकुरा खाने गर्छौं । ति खानेकुरा पचाउने प्रक्रिया मुखबाट नै सुरु हुन्छ । दाँतले खानेकुरा स-सानो टुक्रा बनाएर ¥यालमा रहेको इन्जाइमले यसलाई अरु मिहिन बनाउने काम गर्छ । उक्त खानेकुरा यसरी ग्लुकोज, एमिनो एसिड र फ्याटी एसिडमा बद्लिन्छ । यी तत्व रगतको माध्यामबाट शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ ।massivekhabar बाट सभार